राजश्व संकलनमा झण्डै १४ करोडको प्रगति « गोर्खा आवाज
२८ बैशाख २०७८, मंगलबार
# दुनिया चकित
# आईफोन १३
# माध्यामिक तह
# विश्वासको मत
# धनी गाउँ
राजश्व संकलनमा झण्डै १४ करोडको प्रगति
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ००:००
कैलाली । करदाता सेवा कार्यालय लम्कीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पौने १४ करोड बढीले राजश्व वृद्धि गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा रु १३ करोड ८४ लाख एक हजार बढी राजश्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालयले चालु आवको यस अवधिमा रु ३९ करोड २० लाख राजश्व संकलन गरेको हो । आन्तरिक कारोबारमा बढोत्तरी, करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि र कोरोना सङ्क्रमणका कारण गत वर्ष संकलन नभएको कर यस वर्ष संकलन भएका कारण प्रगति देखिएको हो ।
आव २०७६र७७ को सो अवधिमा रु २५ करोड, ३६ लाख, ६७ हजार राजश्व संकलन भएको थियो । “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजश्व सङ्कलनमा प्रगति देखिएको छ”, करदाता सेवा कार्यालय लम्कीका प्रमुख सेतबहादुर शाही भने, “कोरानाका कारण आन्तरिक कारोबारमा बढोत्तरी भएको छ । यसका साथै करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि र गएको आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण सङ्कलन नभएको कर यस आर्थिक वर्षमा सङ्कलन भएको छ । यसले राजश्व वृद्धिमा सघाएको छ ।”
कार्यालय प्रमुख शाहीकाअनुसार सबैभन्दा बढी आयकर शीर्षकबाट रु २० करोड ८७ लाख १ हजार राजश्व संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा रु १२ करोड ९९ लाख १३ हजार राजश्व सङ्कलन हुँदा अन्तः शुल्क शीर्षकमा रु तीन करोड ६८ लाख २० हजार जम्मा भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “करले देश विकासमा सघाउने भएका कारण सबैलाई करको दायरामा आई कर तिर्न अनुरोध गरिरहेका छौँ ।
यस वर्ष लामो समयसम्म कर नतिरेका नागरिकलाई केही छुट दिएर कर तिर्नसमेत अनुरोध गरेका कारण राजश्व बढेको छ ।” सरकारले निश्चित वर्षको कर छुट गरेपछि लामो समयदेखि विविध कारणले कर नतिरेका नागरिक करको दायरामा आएका छन् ।
विश्वासको मत दिन अनुपस्थित सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्ने
नेपालमा दैनिक कोरोना संक्रमित बढ्दै, कहा कति बढे ?
कस्तो होला आईफोन १३ ! थाहा पाउनुहोस् यसका थप फिचर
आजको राशिफलः २०७८ साल वैशाख २८ गते, मङ्गलबार
संसारकै धनी गाउँको रोचक रहस्य, प्रत्येकको खातामा १ करोड ३६ लाख बचत, कार होइन हेलिकोप्टर ट्याक्सीको प्रयोग
माधव नेपालले ओलीलाई पठाएको त्यो पत्र (पत्रसहित)
प्रधानमन्त्री ओलीले पाएनन् विश्वासको मत, जम्मा ९३ मत प्राप्त
१२ दिनपछि ढुङ्गाले छोपेर राखिएको अवस्थामा ओडारमा शव भेटियो
अब यसरी बन्छ गण्डकीमा नयाँ सरकार